Mileteriga Shiinaha oo tallaal cusub oo koronafayras ah isticmaalkiisa billaabi doona - Tilmaan Media
Hay’adda Caafimaadka Adduunka ayaa waxa ay koox khubaro ah u diri doontaa dalka Shiinaha si ay u baaraan asalka cudurka koronafayras oo doodo badan weli ka socdaan. “Fayraska waxa aan si fiican ula dagaallami karnaa marka aan si cad u ognahay asalkiisa” ayuu yiri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, oo ah madaxa Hay’adda WHO.
Sidoo kale, dawladda Shiinaha ayaa waxa ay mileterigeeda u oggolaatay isticmaalka tallaal koronafayras lagu dagaallamayo oo ay dhawaanahan soo saareen shirkadaha caafimaadka muddo sanad ah.
Cansino Biologics ayaa tilmaantay in tijaabooyinkii hordhaca ahaa ee tallaalka lagu sameeyay ay muujiyeen guul iyo rajo fiican. Tallaalkan ayaa waxaa sameeyay shirkad dawada soo saarta iyo machad cilmi baaris oo ka hawlgala Akaadeemiyaha Cilmiga ee Militeriga Shiinaha.